Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Nnyocha ọzụzụ ndị ọrụ ụgbọ elu dị mkpa maka ọkwa
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
IATA: Ọzụzụ dị mkpa maka ndị ọrụ ụgbọelu na-arịa ọrịa na-efe efe
Achọpụtala nchekwa, ọrụ, nchekwa na ọzụzụ gbasara akụ na ụba dị ka mpaghara ụgbọ elu ebe ọzụzụ ga-achọ ịchịkwa ọnọdụ ugbu a.
36% nke ndị na-aza ajụjụ emegharịala nlebara anya na anya / e-mmụta.
85% nke ndị na-aza ajụjụ nyocha kwuru na mmụta n'ịntanetị gụnyere klas nke mebere ga-arụ ọrụ dị mkpa na mgbake.
Dika ugbo elu na-ewughachi, isiokwu ndị dị ka nkwado na digitalization ga-enweta dị mkpa.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) weputara nyocha banyere ihe nkuzi banyere oru ndi agha dika ndi oru malitere ibido nsogbu COVID-19. A na-ahụta Ọzụzụ ndị Ọrụ Ugbo elu dị mkpa maka ịrụkọ ọrụ ọnụ dị ka ihe dị mkpa
Dabere na nyocha zuru ụwa ọnụ nke ụfọdụ ndị isi mmadụ 800 (HR) na ụlọ ọrụ ụgbọelu na-ahụ maka mmụta na mmepe, ndị ọrụ aka ọrụ nwere ikike ma hụ na ndị ọrụ ọhụụ sitere na mpụga ụgbọ elu nwere ike inweta ngwa ngwa dị mkpa ga-abụ isi ihe iji rụpụta nke ọma post-oria ndi oru
Iji mezuo nke a, ọ ga-adị mkpa ka a gbanwee usoro ọzụzụ, ihe dị ka ọkara ndị na-aza ajụjụ maka ndị ọrụ HR na-ekwupụta na ihe kachasị ha mkpa bụ ịchọpụta ikike ndị nwere ike ị ga-enweta ma depụta ihe ndị a megide ikike ikike nke nzukọ ha. Nke a ga-abụ ntọala maka usoro ọmụmụ ọzụzụ achọrọ. Ọrịa a agbasala ọtụtụ ụgbọ elu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ọnụọgụ uru, dị ka ndị na-enye ọrụ ala, iji chọpụta ụdị ọrụ ndị ọrụ ha nwere iji kwado ọrụ ọhụụ. Otu ihe atụ bụ na ọ dị mkpa ibu ibu n'ụgbọala nke ụgbọelu njem a rụgharịrị iji buru ibu.
Dika ochicho nke njem ugbo elu na-alaghachi, ulo oru ga-eweghachi ndi oru ha ma ha g’enwe ndi n’enweghi oru. Nsonaazụ sitere na nyocha ahụ gosiri na isiokwu nchekwa, arụmọrụ, nchekwa, yana ọzụzụ akụ na ụba achọpụtala dịka mpaghara kachasị ebe ọzụzụ ga-achọ ijikwa ọnọdụ ugbu a. E gosipụtara nchekwa dịka ihe dị oke mkpa maka ụgbọ elu, ndị na-enye ọrụ ala na ọdụ ụgbọelu.
“IATA anọwo na-enye ndị ọkachamara banyere ụgbọelu ọzụzụ ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri ise. Technicaldị ọrụaka nke ụlọ ọrụ anyị, yana ihe achọrọ siri ike nke ndị na-achịkwa kọwara, na-eme ka mkpa maka ọzụzụ tozuru etozu gafee ngalaba ahụ. N'iburu eziokwu ahụ bụ na nsogbu COVID-50 mere ka ọtụtụ ụlọ ọrụ kwụsị kpamkpam ma ọ bụ belata ọzụzụ, anyị ga-aga n'ihu na-agbanwe pọtụfoliyo anyị iji hụ na anyị nwere ike itinye aka na mmalite ọrụ ahụ, "ka Frédéric Leger kwuru, Onye isi oche Onye Isi Ala, Ngwaahịa na Ọrụ Ahịa na Onye isi oche IATA & Cargo Network Services (CNS).
IATA malitere otutu atumatu to nyere aka na ọzụzụ ndị ọrụ ụgbọelu.